Dib u soo kabashada SQL Server Xog laga helay Faylasha Mashiinka Virtual, Faylasha kaabta iyo Faylasha Sawirka Disk
Bogga ugu weyn Products DataNumen SQL Recovery Dib u soo kabashada SQL Server Xog laga helay Faylasha Mashiinka Virtual, Faylasha kaabta iyo Faylasha Sawirka Disk
Haddii aad SQL Server Faylka MDF / NDF waxaa lagu kaydiyaa feylka soo socda:
VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) feyl (*. Vmdk). Tusaale ahaan, waxaad keydisaa SQL Server Faylka MDF / NDF oo kujira disk dalwad ah VMWare.
PC Virtual VHD (Virtual Hard Disk) feyl (*. Vhd). Tusaale ahaan, waxaad keydisaa SQL Server Faylka MDF / NDF oo kujira disk dalwaddii kumbuyuutarka kumbuyuutarka ah (Virtual PC). Ama waxaad ka dhigeysaa kayd SQL Server Faylka MDF / NDF adoo adeegsanaya Windows Backup iyo Restore function.
mana heli kartid xogta ku jirta feylka MDF / NDF sababo jira awgood, tusaale ahaan:
Waad tirtirtaa kanaga SQL Server MDF / NDF faylka laga soo qaaday diskiga dalwaddii ku jira VMWare ama PC Virtual.
Faylka keydka ah ee warbaahinta keydka ah ayaa kharribmay ama dhaawacmay oo dib uma soo celin kartid faylkaaga MDF / NDF.
Faylka muuqaalka diskiga ayaa ah mid musuqmaasuq ah ama waxyeello soo gaadhay oo kama soo saari kartid faylkaaga MDF / NDF.
Markaa wali waad ku soo ceshan kartaa xogta ku jirta faylka MDF / NDF adoo iskaan qaadaya isla markaana soo ceshanaya mashiinka muuqaalka mashiinka muuqaalka ee u dhigma, faylka keydka ah ama faylka muuqaalka sawirada leh DataNumen SQL Recovery. Kaliya dooro feylka mashiinka kumbuyuutarka kumbuyuutarka, feylka faylka ama feylka feylka faylka ah sida feylka isha ee la dayactirayo, DataNumen SQL Recovery iskaan doonaa faylka isha, falanqeyn doona, soo ceshan doonaa SQL Server xogta ku kaydsan feylka, una soo saar fayl cusub oo MDF ah ama qoraal cad oo qoraal SQL ah oo loo isticmaali karo dib u dhiska keydka xogta.
Haddii feylkaaga MDF / NDF uu ku kaydsan yahay disk adag ama wadis, mana heli kartid faylka MDF / NDF sababo jira awgood, tusaale ahaan:
Waad tirtirtaa kanaga SQL Server MDF / NDF faylka ka soo baxa diskiga adag ama wadista.
Markaas waad isticmaali kartaa DataNumen Disk Image si loo abuuro sawir ka mid ah diskiga adag ama wadista, ka dibna ka soo kabo xogta MDF / NDF feylka feylka leh DataNumen SQL Recovery.